दाँत माझ्दा हटाउन पर्ने ५ गल्तिहरु – Himalaya TV
दाँत माझ्दा हटाउन पर्ने ५ गल्तिहरु
२२ फाल्गुन २०७३, आईतवार २०:१९
काठमाण्डौ, २२ फाल्गुन । सुन्दर हाँसो तपाईको एउटा आकर्षक गुण । तर के कुराले तपाईको दाँतलाई खराब गर्छ ? पुरानो दाँतसम्बन्धी अपनाइने गतिविधिले । धेरै मानिसहरु दैनिक आफ्नो दाँतलाई ख्याल गर्दैनन् । तपाई आफ्नो दाँतलाई राम्रो बनाइराख्न चाहनुहुन्छ भने तपाई प्रायसः दन्त विज्ञका गइराख्नुपर्छ । तर राम्रो दाँतसम्बन्धी हेरचाह घरबाट नै सम्भव छ । दाँत माझ्ने शैलीमा परिवर्तन ल्याउनु नै दाँतको राम्रो हुरचाह हुन सक्छ । हामीले दाँत माझ्दा गरिने साधारण ५ वटा गल्तीलाई हटाउन पर्ने देखिन्छ ।
१. एउटै ब्रस लामो समयसम्म प्रयोग गरिरहनु
दैनिक दुई चोटि दाँत माझ्दा त्यो ब्रसको आयु करिब ३ महिनाको हुन्छ । करिब २ सय पटकको प्रयोगपछि त्यो ब्रसको आयु सकिन्छ । अर्थात् तपाईले अर्को नयाँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । टुटेका, बिग्रिएका ब्रसबाट तपाईले राम्ररी दाँत माझ्न सक्नुहुन्न ।
२. पर्याप्त समयसम्म दाँत नमाझ्नु
दुई मिनेटसम्म दाँत माझ्नुलाई उत्कृष्ट समयमा मापन गरिएको छ । तर तथ्याङ्क हेर्दा व्यक्तिको औसत दाँत माझ्ने समय मात्र ४५ सेकेण्ड रहेको छ । २ मिनेटभन्दा कम समय लगाएर दाँत माझ्दा त्यो राम्रो दाँतको हेरचाहको लागि पर्याप्त हुँदैन ।
३. बाथरुममा ब्रस राख्नु
हामी प्राय यस्तै सामान्य गल्ती गर्छौं । यो नै हामीले सबैभन्दा ठूलो गल्ती गरिरहेका छौं । किन त ?
जब हामी बाथरुममा ब्रस राख्छौं तब बाथरुम फ्लस गर्दा त्यहाँ भएका किटाणु यत्रतत्र छरिन्छन् । र त्यस्ता किटाणु तपाईको ब्रसमा नरहलान् भन्न सकिन्न । यसले गर्दा तपाईको दाँतमा सहजै नकारात्मक असर पु¥याउँछ ।
४.जिब्रो सफा नगर्नु
दाँत माझिसकेपछि अनिवार्य रुपमा जिब्रोको पनि सफा गर्नुपर्छ । जसले जिब्रोमा भएको किटाणु पनि रहँदैन । यसो गर्न झन्झट पनि छैन । ब्रसको पछाडिपट्टिबाट जिब्रो सफा गर्न सकिन्छ ।
५. दिनमा दुई पटकभन्दा बढि दाँत माझ्नु
दिनमा दुई पटकभन्दा बढि दाँत माझ्नु पनि आवश्यक छैन । केही व्यक्तिहरु दिनमा तीन चार पटकसम्म दाँत माझ्नु उचित सम्झन्छन् । यसो गर्दा दाँत र गिजामा बढि असर गर्दछ ।